UBUNGQINA BEKHAPHETHI YOBOYA KUNYE NEENGOZI - UKULUNGISWA NGAPHAKATHI
Eyona ukulungiswa Ngaphakathi Ubungqina bekhaphethi yoboya kunye neengozi
Ubungqina bekhaphethi yoboya kunye neengozi
Apha sabelana ngeenzuzo zekhaphethi zoboya kunye neengozi kubandakanya indleko zazo kunye neentlobo ezilungileyo zoyilo lwakho lwangaphakathi. Inkqubela phambili kwimveliso ikhokelele ekuthonteleni kweekhaphethi ezenziwe ngexabiso eliphantsi, ezakhiwe ngezinto zokwenziwa. Kodwa iikhaphethi zoboya bezikho kangangeenkulungwane, kwaye aziyi ndawo nanini na kungekudala.
Uboya bunempawu ezininzi ezenza ukuba ube ngumgangatho ofanelekileyo wokugquma, kunye neengxaki ezimbalwa ngokunjalo. Eli nqaku lihamba kuzo zombini, ukuze ukwazi ukuthenga ngokuchanekileyo.
Izibonelelo zekhaphethi yoboya
Iimpawu eziMelana neLangatye
Iingxaki zoboya bekhaphethi
Iindleko zekhaphethi yoboya
Ezona khaphethi zoboya
Buza nabani na onekhaphethi yoboya ukuba bacinga ntoni ngayo kwaye kunokwenzeka ukuba ufumane umjelo omde wokudumisa. Iyahlala, i-hypoallergenic, i-eco-friendly, ibala kunye nokuthintela ukungcola, kukho uluhlu olude lwezizathu zokuba kutheni ikhaphethi yoboya ikufanele ukuqwalaselwa nzulu kwixesha elizayo xa ufuna isigubungelo somgangatho.
Ikhaphethi yoboya ibetha ngesandla lonke olunye uhlobo logqume lomgangatho xa kufikwa kuzinzo. Zininzi izizathu zoku.
Okokuqala, imicu yoboya ngokwendalo yajika. Ubungakanani beliza elixhomekeke kwisilwanyana nakwingingqi uboya obukhutshiwe kubo.
Le wave kuthethwa ngayo njenge crimp. I-Crimp inoxanduva lokuqina kweentsinga zoboya. Naxa ucinezelwe ixesha elide, xa ubunzima bususwe, uboya buya kuqhubeka nobume bendalo.
ndizakukufumanela ii-crasher zomtshato
Oku kuthetha ukuba iikhaphethi zoboya azichanabeki kangako kwimfesane okanye kwimiboniso evela kubunzima befanitshala. Kwishishini lekhaphethi, olu hlobo lomonakalo kubhekiswa kulo 'njengepile compression'
Esinye isoyikiso kukuqina kwekhaphethi kukulandela umkhondo okanye ukufiphaza. La magama mabini abhekisa kumahluko kwimbonakalo ebonakalayo yeekhaphethi ezithile emva kokuba zikhutshiwe okanye zihambile.
Utshintsho kumbala lubangelwe licala lemicu ebonakalisiweyo kwaye ibonisa ukukhanya, endaweni yeengcebiso. Kuba uboya bunokubuyela umva ngokwendalo, nakuphi na ukufiphaza okanye ukulandelela kuya kuhlala ixesha elifutshane.
Iikhaphethi zokwenziwa zibiza ixabiso eliphantsi kwiifektri zisebenzisa iintlobo ezahlukeneyo zeekhemikhali eziyityhefu. Abasebenzi bakhuselwe koku ngexesha lenkqubo yokuvelisa, kodwa kwenzeka ntoni xa ubuyisela ityali yakho ekhaya?
Izinto ezingaxutywanga zendalo, ezikwabizwa ngokuba zii-VOCs, zikhutshwa emoyeni kungekuphela ngexesha lofakelo, kodwa iminyaka phantsi komgca, ngenkqubo eyaziwa ngokuba yi ‘off-gassing’, edibene nokucaphuka kokuphefumla.
Ngelixa ezinye iikhaphethi zoboya zine-20% yezinto zokwenziwa, ezininzi azinazo kwaphela. Nokuba yeyiphi na indlela, ubukho be-VOCs ekhayeni lakho buncitshiswe kakhulu ukuba ukhetha ikhaphethi yoboya ngaphezulu kwepolypropylene.
Ikhemikhali ekuphela kwayo edityaniswa rhoqo kwiikhaphethi zoboya sisinambuzane esithile esiphikisayo esikalwe ngokukhuselekileyo ukuba sisetyenziswe ekhaya nguMbutho wezeMpilo weHlabathi.
Uboya ikwalilaphu 'eliphilayo'. Iintsinga zekhaphethi yoboya ziya kuthatha ukufuma okugqithileyo emoyeni, kwaye zikhulule xa umoya womile, ngokwendalo umodareyitha ubungakanani bokufuma ekhayeni lakho.
Isizathu sokuba iikhaphethi zoboya zaziwa ngokugcina uyilo oludlamkileyo kumaxesha amade ehla ngendlela eziphatha ngayo iimolekyuli.
Amasuntswana ahlawulwayo enza ifayibha yoboya atsala amasuntswana ahlawulisiweyo kwidayi, ebabopha ngokuqinileyo ngokudibeneyo. Uboya buyamkela kwaye buphathe idayi ngcono kunekhaphethi ezenziwe kwezinye izinto ezinje nge polypropylene.
Nangona kunjalo, ubume boboya abunakukhusela idayi ekutshabalaleni ukuba ihlala ityhilekile ekukhanyeni kwe-UV, ke khumbula ukuba lilanga elingakanani ngqo ikhaphethi yakho yoboya ifumana.
Uboya bendalo bugqunywe kumaleko okhuselo weoyile eyaziwa njenge lanolin. Iigusha nezinye izilwanyana ezivelisa uboya zixhomekeke kwilanolin ukuzigcina zicocekile kwaye zomile, kuba inamanzi endalo kunye neepropathi zokugxotha ukungcola.
Ukutyabeka kwe-lanolin kuthintela ukungcola kunye namabala ekungeneni kwifayibha. Uboya bukwaye ngokwendalo buchasene nokumila, ngoko ke abutsali uthuli. Iikhaphethi zoboya kufuneka zicocwe rhoqo ukususa nabuphi na ubumdaka kunye namasuntswana othuli awileyo.
Akukho mfuneko yokuba zithanjiswe ishampu okanye zicocwe ngomphunga, kwaye ngokwenza njalo kungasusa i-lanolin, ke ezi ndlela zokucoca azicetyiswa.
Iikhaphethi zoboya zilungelana nokusingqongileyo kuba zenziwe ngezixhobo ezihlaziyiweyo, ezizezi, uboya begusha, ialpaca, ilama, ibhokhwe, kwanenkamela.
Igusha yasendle iyakhula ize ilahle uboya bayo kwimijikelo engqinelana namaxesha onyaka. Iigusha zasekhaya, kwelinye icala, ziye zafuywa ukuvelisa uboya unyaka wonke.
Abaphalazi ngeqondo eliphezulu ngokwaneleyo ukugcina uboya bungakheki, obunokubangela iingxaki zolusu kwaye zikhokelele ekwenzakaleni, ngoko ke ukucheba kuyadingeka ukugcina kugcinekile kwaye kusempilweni.
Izimvu ezichetyiweyo aziphindi zifumane amava kunenja ethathwe kumlungisi weengcali.
Xa kufika ixesha lokuthatha umhlala-phantsi kwikhaphethi yoboya, abathengi abathanda i-eco baya kukuvuyela ukwazi ukuba uboya abuphelelanga nje ukuba bube zii-biodegradable, inkqubo yokuthotywa komhlaba ityebisa umhlaba ngokukhupha izakhamzimba ezifana nesalfure kunye ne-nitrogen.
Enye yezona mpawu zixabisekileyo zoboya kukucotha komlilo kunye nokumelana nelangatye. Akukho mntu ulindele umlilo, kodwa ukuba kuqhambuke umntu ekhayeni lakho, kuyathuthuzela ukwazi ukuba ikhaphethi yakho yoboya inokukucothisa ukusasazeka, endaweni yokondla umlilo.
Kuxhomekeke kubude bokubhencwa kunye nobushushu bamadangatye, iintsinga zoboya kunokwenzeka ukuba zinyibilike kunokuba zibaswe.
amakhonkco ezigidi zeerandi yokuzibandakanya athengiswayo
Ngelixa uboya buxabisekile ngenxa yedayi-yokubanako kwayo kunye nokugcinwa kombala, kukho elinye icala kuloo ngqekembe ‘- ukuchitheka. Ikomityi yekofu okanye iglasi yewayini ebomvu echitheke kwikhaphethi yoboya kwaye ivunyelwe ukuba yome kuya kuba nzima, ukuba akunakwenzeka, ukuphuma.
Nangona kunjalo, ulwakhiwo lweentsinga zoboya luya kugcina ulwelo lungangeni kwangoko luye kumbindi wefayibha, ke ukuba wenza ngokukhawuleza ukufunxa ukuchitheka, unokuthintela amabala asisigxina.
Njengoko kukhankanyiwe ngentla, uboya buya kubamba bube bunyanzele ukufuma emoyeni. Ukuba ayomiswanga ngokupheleleyo, ukungunda kunokukhula. Ngesi sizathu iikhaphethi zoboya azilungelanga ubumanzi obugqithisileyo okanye iimeko ezimanzi.
Akukho ukusondela kuyo - iikhaphethi zoboya zinamaxabiso aphezulu kakhulu okuthenga ngaphambili kunezinye izinto zokwenziwa. Ixabiso eliphakathi kunyawo lwesikwere lokwenza iikhaphethi zoboya yi- $ 4-12.
Iikhaphethi zepolyester zibiza kuphela i- $ 1-3 ngeenyawo zenyawo. Lindela ukuhlawula i-1-3 yeedola ngeenyawo zekhaphethi ezakhiwe ngenayiloni. Nangona kunjalo, xa ucinga ngobomi bekaphethi yoboya bunokufikelela kwiminyaka engama-20, iindleko ziqala ukwenza intsingiselo ethe kratya.
Ukuba ikhaphethi ebiza ixabiso eliphantsi ixabisa kangangesiqingatha, kodwa ikwahlala ixesha elide, awukalondolozi imali, usasazile iindleko ngokuhamba kwexesha.
Iikhaphethi zoboya ezili-100% ezenziwe ngomsonto woboya zijongwa njengeyona khaphethi yoboya ingcono enokuthengwa yimali.
Ziintlobo ezithile kuphela zeegusha ezivelisa uboya bezintambo, kwaye ezi ntlobo zeentaka zifumaneka ngokubanzi eNew Zealand nase UK.
La mazwe mabini anembali ende neqhayiya yokuvelisa uboya obuphezulu. Uboya baseNew Zealand baziwa ngokuthamba kunye nokukhanya, ngelixa uboya baseBritane butyebile, bungqindilili, kwaye buninzi.
Iikhaphethi zoboya ezingama-80/20 zenziwe ngomxube woboya kunye nezinto zokwenziwa, kwaye lukhetho oluhle kakhulu.
Khumbula, iigusha ayizizo zodwa izilwanyana eziye zaqhelana nokukhula koboya. IiLlamas, iinkamela, iialpacas, kunye neebhokhwe nazo zinokucheba ukubonelela ngemicu yeekhaphethi.
Uhlobo ngalunye loboya lunendlela yalo yokuthambisa kunye nombala, ukubonakalisa isilwanyana esivela kuso. I-Llama kunye ne-alpaca fibers yentsimbi, umzekelo, zincinci ngobubanzi kunoboya begusha, kwaye oku kunika ukuthamba okungaphezulu kunye nosilika kwizinto.
Siyathemba ukuba uyonwabele i-carpet car pros kunye ne-cons. Ucinga ntoni, uthanda iikhaphethi zoboya ekhayeni lakho? Ndwendwela eli phepha ukubona okungakumbi Iindidi zekhaphethi Uyilo lwakho lwangaphakathi.
indlela ye-rsvp ngombhalo
Umkhonzazana weedresi zembeko enemikhono
Eyona honeymoon ilungileyo kuhlahlo-lwabiwo mali
iinwele zomtshato zobuso obujikelezileyo
ubopha njani iqhina lendoda
Olona suku lungileyo lokutshata ngo-2021